Daabacaadda abuurka | March 2020
Waxaan abuurnaa gacanta sare ee gacmahayaga
Ugu Weyn Ee Daabacaadda abuurka
Noocyada beeritaanka ee celery-dillaac: xeerarka beeraha iyo daryeelka
Celery waa cunto qiimo leh oo leh waxyaalo badan oo waxtar leh. Sidoo kale waa daaweyn. Geedku wuxuu hoos u dhigaa gabowga, wuxuu dejiyaa nidaamka dareemayaasha, wuxuu ka caawiyaa dheef-shiidka si fiican u shaqeeya wuxuuna si fiican u dhaqaa nidaamka wadnaha iyo xididdada. Ma taqaanaa? Celery waa alaabta ugu fiican ee luminta khasaaraha.
Fennel: beerashada iyo daryeelka ee aqallada xagaaga
Fennel, ama dillin farmashiyaha, muuqaalkiisu wuxuu aad u la mid yahay dill caadiga ah, inkastoo ay leedahay dhadhan gebi ahaanba ka duwan. Bannaanka u dhaxeeya, geedka tani ma aha mid caadi ah, tan iyo geedi socodka ah ee sii kordhaya waa shaqo adag. Laakiin kuwa bannaanka u jira waxaa jira kuwa jecel sida loo beero iyo koraan fennel ee dalka.
Tiknoolojiga beeraha ee beerista arugula ee dhulka u furan
Dukaammadu waxay na siiyaan noocyo kala duwan oo geedo iyo dhir udgoon, laakiin hooyooyinka intooda badan waxay doorbidaan inay iyaga koraan. Haddii aad leedahay qorshe, maxaad iskudayeysaa? Iyadoo kharashka ugu yar, waxaad heli doontaa ma aha oo kaliya goosashada cagaarka cusub, laakiin sidoo kale raaxo weyn, daryeelidda dhirta sii kordhaya iyo sugitaanka natiijada.
Currant Black: waxaannu beeri, waannu koraan, waxaan soo ururinaynaa
Ku celi ubax gurigaaga - sharaxaad ka mid ah gabalka Gertrude pelargonium, talooyin daryeel iyo sawirro dhir
Miraha delicious iyo quruxda badan, ku fiican ee samaynta casiir - Tufaax kala duwan oo tufaax ah
Sidee ayuu isticmaalka sunta cayayaanka u saameeyaa caafimaadka iyo deegaanka
"Brovafom cusub" for digaagga: tilmaamaha isticmaalka
Dadku waxay og yihiin in buffoonku uusan ku noolayn Afrika iyo Aasiyaanka oo keliya, iyo in ayan ahayn kaliya sida hilib digaag ah, laakiin sidoo kale dalagga beeraha, iyo sidoo kale helitaanka caanaha baruurta caafimaad leh. Xayawaankani, inkastoo ay ku qiyaasaan qiyaasta cajiibka ah, ayaa ah xayawaan aad u fiican oo nabdoon. Inta badan wakiilada iyo indhuhu ma hogaamin doonaan jihada qofka haddii uu iyaga ula yimid ujeedo fiican oo aan doonaynin in ay qaadaan nolosha ama xorriyadda. Read More
Guryaha kala duwan ee bearberry: sharaxaad ka mid ah sida loo qaato
Kala duwanaanshaha asalka ah ee dalagyada waaweyn - yaanyada "Tufaaxa barafka": sharaxaad, astaamo, sawirro
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Daabacaadda abuurka 2020